CENI, HCC, Governemanta, Prezidansa : Hotsarain’ny tantara ! -
AccueilRaharaham-pirenenaCENI, HCC, Governemanta, Prezidansa : Hotsarain’ny tantara !
06/11/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hikarakara fifidianana tafiditra ao anatin’izany ny fanadiovana ny lisi-pifidianana no andraikitra nankinina tamin’izao governemanta Ntsay Christian izao fa tsy hanadio fako eny Ankorondrano. Tomponandraikitra feno amin’ny fizotry ny fifidianana ireo andrim-panjakana efatra dia ny CENI, HCC, Prezidansa ary ny Governemanta.
Rahampitso no hanatanteraka ny safidiny ny vahoaka Malagasy manerana ny Nosy. Adidy masina sady mankadiry tokoa no hatrehan’ny Malagasy ny faha-7 Novambra 2018 satria hifidy izay ho filoha hitantana ny firenena mandritra ny dimy taona. Ao anaty lisi-pifidianana daholo ve ireo olom-pirenena feno taona manan-jo handatsa-bato?
Tsia avy hatrany ny valiny satria maro ireo olom-pirenena mimenomenona fa tsy mba isan’ny nomena izany zo izany ny tenany: ao ireo efa nindaosin’ny fahafantesana an-taonany maro kanefa mbola nahazo kara-pifidianana, ao ireo efa nipetraka an-taonany maro teo amin’ilay fokontany ary misoratra mazava ao amin’ilay fokontany (mandoa adidy, mandray an-tanana amin’ny asa sy ny fivoriam-pokonolona) kanefa tsy tafiditra ao anaty lisi-pifidianana. Ny hafa indray diso ny anarana, tsy araka ny voasoratra ao anaty karapanondro, sns. Ho hita eo tokoa araka izany raha tena nahavita ny andraikitra nankinina tamin’ny CENI.
Voka-pifidianana madio sy mangarahara no andrasan’ny olom-pirenena amin’ity fifidianana filoham-pirenena ity ary rariny loatra tokoa raha voka-pifidianana tena maneho ny vato narotsaky ny mpifidy no havoakan’ny HCC, tsy sanatria voka-pifidianana feno kajikajy politika sy hosoka ary halatra. Fitoniana, fampandrosoana, fialana amin’izao fahantrana no fanantenan’ny vahoaka aorian’ny fifidianana fa tsy korontana na savorovoro ateraky ny voka-pifidianana avoakan’ny HCC.
Mampalalahelo tokoa mantsy fa tsy manana fitokisana amin’ny HCC ny vahoaka, andrim-panjakana tokony hampihatra lalàna kanefa lasa mpanao politika ary tsy mbola namoaka afatsy fanapahan-kevitra politika hatramin’izay naha filohan’ny HCC an’i Jean Eric Rakotoarisoa izay.
Tomponandraikitra goavana amin’ny fisian’ny fandriampahalemana aloha, mandritra ary aorian’ny fifidianana ny Governemanta Ntsay Christian, toraka izany koa ny filoha mpisolo toerana Rivo Rakotovao. Izy ireo no miantoka ny fiarovana ny ain’ny olona sy ny fananany, ny fahafahan’ny olona mivezivezy, ny zon’olombelona ary indrindra ny filaminana anatin’ny firenena iray manontolo mandritra izao vanim-potoanan’ny fifidianana izao. Izay rahateo koa no andraikitra nankinina tamin’ity Governemanta iaraha-mitantana ity fa tsy hanadio fako eny Ankorondrano araka ny efa nambara tetsy ambony.
Eo am-pelatanan’i Ntsay Chrsitian lehiben’ny Governemanta iaraha-mitantana, Jean Eric Rakotoarisoa filohan’ny HCC, Rivo Rakotovao filoham-panjaka mpisolo toerana ary Hery Rakotomanana filohan’ny CENI ny fiainam-pirenena. Tomponandraikitra feno tokoa izy ireo amin’izao fifidianana filoham-pirenena izao ary hotsarain’ny tantara!
Raha tonga nitarika ny lanonana fametrahana ny vato fehizoro amin’ny fanombohan’ny asa fanamboarana ny “Lalan’ny Atody” (Route des Oeufs) teny amin’ny Kaominina ambanivohitra Mahitsy, distrikan’Ambohidratrimo, omaly, ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, dia nambarany tamin’izany fa “ampy ...Tohiny